Kare isitebhisi on izinwele ezinde, short naphakathi. isithombe
Kare isitebhisi - uhlobo base we wendlale haircuts izinwele. Nentokazi kwekhanda enjalo ubukeka isithombe njengabesifazane kuba uhlobo lobuhle nokubukeka futhi romanticism. Uma sendleleni njalo, lo ngesivinini wokuphila, isikhathi ekuseni isitayela uhlala. Ukuze kuxazululwe le nkinga ngezindlela ezimbili: ukubeka izinwele e isixha noma Ponytail kuyisicefe noma uvakashele salon ubuhle futhi wenze imfashini ukugunda izinwele isitebhisi sikwele. Qaphela ukuthi ubude izinwele, uma ufuna iklayenti lilondolozwe kuya esiphezulu.
ukugunda izinwele Universal - kukhethwa amantombazane kokuzethemba
Kare isitebhisi elinesimo inzuzo eliyisisekelo phezu kwezinye izinhlobo haircuts. Ihlala eqinisweni lokuthi sibonga ehlukahlukene izinwele locezu wizadi kudala kwekhanda ku nezinwele ezinde emifishane kanye nephakathi nendawo eside. Ngaphezu kwalokho, ukuthandwa isikwele kungenxa lula ukugcinwa kanye nekhono ufihle amaphutha ubuso okusaqanda, uma akusiwona ephelele. Yesilinganiso ukuhlukanisa zone engaphelele kanye ulungise ubude entanyeni kuzosiza multi-okufana isitebhisi sikwele.
I degree of izinwele Samandla inquma isitayela sezinwele: ushintsho oluhle futhi imigqa kahle ichazwe.
Izingcweti zisebenzisa ezintathu amagama haircuts: Cascading, letihlungiwe, isitebhisi. Eyokuqala zenyathi azifani nezinye izinhlobo zesijeziso. isizinda Photo onobuhle aboniswa ngezansi. Esesithathu uhlobo - ke okungukuthi base, kodwa kubekwa phezu emifishane kanye nephakathi nendawo eside izinwele ukwahlukahlukana.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe zezinwele ukuthi kubukeka kahle izinwele ebuhleni nasebubini. Ngesicelo izinwele wekhasimende stylist wenze izinguquko ezintathu nokuningi. Esikhathini isithombe sokuqala sikhombisa isikwele double ne iziqu kanye umphetho. Ivolumu ladvwetjelwe ukumnika organic of nezinwele ezimfishane kwendawo occipital e ringlets eside.
Okunethezeka izinwele ezinde
Bob ukugunda izinwele isitebhisi ku curls ngezansi emahlombe okungukuthi lidumile ozinikezele futhi kuyiqiniso izinkanyezi show ibhizinisi kusuka 50s. Master bezinwele ngobuciko cut out Strand ngu Strand ngesimo izitebhisi. Lokhu kwakha aluhlaza umphetho fudlana curls romantic phambili endaweni. Beauty salon njalo ukugunda izinwele ubukeka uzilungise.
Kuyaphawuleka ukuthi ukugunda izinwele futhi wenze izinwele flat futhi abacaphuni. Nyusa ivolumu yokuba inhloko izinwele izinwele elincanyana ingatholakala curling sivala ukuhlala uthokomale ufunde out.
Kare isitebhisi ezinde imodeli. Ukuthatha njengesisekelo ukubukeka eziyisisekelo futhi umphelelisi sokuvalelisa hlangothi nakuloluya umphetho noma isigaba phuca kuphela endaweni yesikhashana. Ukugxila ifomu kanye nenani ingatholakala staining. Ukukhetha Stop kangcono ukufaka umbala nofana Ombre.
Haircut ku izinwele ubude naphakathi
Amanye amantombazane acabanga ukuthi isitebhisi isikwele Cascading samuntu haircuts ezifanayo. Nokho, le nkulumo ayilona iqiniso. Bayehluka kule lobuchwepheshe izici lapho esigabeni idlula iladi, yazalelwa ngaphansi sikwele.
Isici impahla isitebhisi ngaphansi isigwebo ngalolo ubude ngamunye ungqimba olandelayo izinwele esifushane kuka owedlule 3-5 amamilimitha angu. Ngenxa yalokho, i-zinyakaze we parietal esishintshashintshayo obuphelele kathathu imicu yesikhashana. Qalisa inguquko bushelelezi ungenziwa kuphela balukhulume nge isipiliyoni esiwusizo, ngekhono yokusebenzisa isikele.
Inzuzo eyisisekelo haircuts bob isitebhisi kokuphakathi obuphelele izinwele ukuthi inkosi kwenza occipital endaweni aluhlaza. Inqubo laying ikamu isiyingi futhi hairdryers kuthatha imizuzu engu-20 noma ngaphansi. Kunconywa ukusika amantombazane izici indawo ebusweni ngenhloso ukunciphisa imigqa ezibukwayo.
isitebhisi inketho nezinwele ezimfishane
Ugunda kufanelekile Amantombazane kanye labo sebenzisa be kunyakaza. Isithombe etholwe intsha kanye abanonya. Okusaqanda ubuso wesifazane - a lunqume lapho ekhetha ukugunda izinwele ubuchwepheshe ukuqaliswa. Nge uhlobo square kungcono makudle idlanzana izinyathelo. Izikhiye, okuyinto emifushane kobude esisele emgqeni ngokufanele ngaphezu indlebe. Esinye isincomo - kwekhanda ngaphandle esiphongweni. Njengoba i okuhlukile ukuvumela ukhetho etshekile. Uma kungenjalo, umuntu ongaboni mfushane.
Zingu nezinwele isitebhisi square ku nezinwele ezimfishane kuyodingeka ivolumu. Izinwele kuyoba indlela ezithambile kanye Airy, nenhle. Uma uhlobo lomuntu round esiphongweni kuvunyelwe: etshekile, letihlungiwe, bushelelezi. Kukhethwa okungukuthi ikhasimende.
ukugunda izinwele engeziwe ezihamba Umdwebo: ukugqamisa noma Umbala.
Kare isitebhisi ne iziqu
ukugunda izinwele Kwethulwa - ukushintshashintsha mkhuba version eziyisisekelo. Kunconywa ukuba nizifeze zonke izinhlobo izinwele: abaqondile, abacaphuni, obukhulu, ezingavamile, hhayi isitayela futhi ulahlekelwe fomu.
Kara kuyinto isitebhisi letihlungiwe multilayer kwekhanda. Isibalo izigaba kunqunywa ukuma ebusweni nesifiso iklayenti. Izinwele egeleza wendlale, lapho umucu ngamunye sifushane futhi uwela ngokushelela siyaqhubeka ungqimba olandelayo. Ngocelemba kusetshenziswa amasu slaysinga futhi thinning.
Ezinye amakhosi ngumnikazi amasu ukugunda izinwele insingo iqonde nge okunamathiselwe thinning. Kulokhu, umphumela idlula okulindele ukuhwebelana bushelelezi futhi unnoticeable.
Shearing kungenzeka lesinesitfombe-sibuko noma quin. Geometric ukwephulwa ngezabelo ukudala ifomu inkambiso futhi ugcizelela uthando wentombazane izinto ongavamile. Ochwepheshe batusa ukuba uzame ngawo izinwele kuphela labo amantombazane abangenawo okusaqanda ubuso hlobo.
Ladder nge ukunwebeka e square limelela enye indlela ukuze ekudaleni zezinwele wendlale. Inketho lidumile amaklayenti bobudala obungefani wafika ngaphansi kwethonya imfashini. Izihlahla ivumela intombazane ukugcina ubude izinwele, kodwa ngesikhathi esifanayo ukuze uvuselele umfanekiso waso futhi uhlale lo mkhuba.
version enwetshiwe ubukeka njalo besifazane, ngenxa ukubiyela ubuso imicu esithambile. Libuye libe yindlela enhle ukuze ulungise cheekbones okusezingeni eliphezulu nokugcwala ebusweni. Abalungisa izinwele bathi zonke izinhlobo Quads, izithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko kungenziwa ingashintshwa ukuze noma iyiphi uhlobo lomuntu. Nokho, esimweni ukusebenza enwetshiwe yi engcono iyobheka lady chubby.
Embodiments esitebhisini isikwele noma nesigaba okuningi. Uma uvakashela ezinhle ubuhle salon master ukhethe njalo ukuma ezingeni esitebhisini, okuyinto ekufanele.
Uma izinwele ngesiswebhu Okufanele Ukwenze?
Njengoba lisetshenziswa izinwele burdock kwesokudla? Kanjani uwoyela burdock okumele asetshenziswe phezu izinwele?
NoKseniya Larina - iziqu "American Idol." Biography, ukuphila umculi komuntu siqu
Jumpers eyisikwele - ukugqagqana for ukuvulwa
Ukususa nokushaya: isikhathi. Ukususa kushaywa: inqubo